Oromiyaa: Asaffaa Kuushii Eenyutu Ajjeese? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Asaffaa Kuushii Eenyutu Ajjeese?
Asaffaan to’annoo seeraa jala otoo jiruu ajjeefamee bosonatti gatame. Asaffaan Ji’a tokko dura gara Baaleetti fudhatamee kan ture yoo tahu torbee darbe gara Salaaleetti geessanii mana hidhaa ture. Godina Baalee irraa gara Salaalee kan geesse poolisoota aanaa Kuyyuu tahuun barameera.
Abbabaa Garasuu fi Baqqalaan goota kana mana hidhaarra baasanii kan ajjeesan ega Abbootii Qabeenyaa Nafxanyaa #Darraa waliin dubbatan booda akka tahes irra gahamee jira. Abbootiin qabeenya kunniin maallaqa guddaa kallafaluun ijoollee Oromoo qaalii taate ajjeesisaa turan armaan duras. Maqaa fi qabeenya isaani qorannee kan saaxilla tahuu isin beeksisna.
Roorroo abbaatu ofirara deebisa!
Kun Qeerroo Oromoo kaleessa mana hidhaatii baafamee ajjeefamee dha. Maqaan isaa Asaffaa jedhama. Dhaamsa kana waliin karaa keessaa na gahe: “Gara nama nyaata . Maaloo ani nageenya koof waanan sodaadhuuf video kana share gochuu hin danda’u. Ati garuu gocha gara jabinaa polisiin adda oromiyaa ummata keenya qaqqaalii irritti fudhachaa jirtu kana ummata oromoon naaf ga’i; Ulfaadhu.” Eehee bakak jirru maratti sagalee waliif ta’uun keenya itti fufa! Kaayyoon keenya galii isaa ni gaha!!
Kadiir Abdallaa, Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti guyyaa har’aa waraana mafiyaa pp’tiin wareegame!
Barsiisaa Kitilaa Guddataa guyyaa kaleessaa waraana mootummaa Abiy Ahmad bobbaaseen Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessatti ajjeefame.
Humni addaa Oromiyaa jedhamu kun sadaasa 19/2020 barsiisaa Kitilaa Guddataa mana jireenyaa isaa magaalaa Saqalaatti argamu keessaa fuutee halkan edaa Sadaasa 20/2020 ajjee gatte.
Namni isa beeku tokko akka naaf ibsetti, Kitilaa Guddataa, barataa qaxalee nama onnee cimaa qabu ture.
“Ani Waggoota sadiif hidhamee ergan mana hidhaatii ba’ee Yuniversitii Finfinneetti deebi’ee booda Kitilaa waliin walbare. Kitilaan onnee gootummaa qaba.”
Raga bahaan kun akak ibsetti, Kitilaan nama dagatamuu miti. “Gaafa tokko mooraa Yunivetsitii keessatti barattoota Oromoo fi barattoota Tigree gidduutti lolli ka’ee Kitilaan qofaa isaa Tigroota sadii ari’ee reebuu isaa nan yaadadha. Kitilaan ajjeefamuu isaa kaleessa dhagahee baay’een gadde.”
Lubbuun qabsaa’ota Oromoo guyyuu darbu, guyyaa bilisummaa Oromood hiheessa; awaalcha gabroonfattootaa ariifachiisa!
Nutis bilisummaa Oromoof falmuuf dirqama lammummaa qabna!
Nagaan Oromoo deebi’uu qaba!
Gaaddisaa Alamaayyoo (Shigee)otuu rafaa jiruu halkan mana isaatii fuudhanii bahanii ajjeesanii gatan.
Namni Otromoo kun kan manaa baafamee humna addaa Oromiyaa ture. Manaa fuudhamee ajjeefamee gatame. Dacheen Oromiyaa dhiigaan guutee jira. Mootumaman Abiy kan yeroon itti darbe, abdii kutannaa keessa galuun qabsaa’ota daandii haqaarra jiran fixaa jira.
Sirni kun akka dafee Oromiyaa keessaa buqqa’u gochuun abrbaachisaa dha.
Goota keenya wareegameef, nagaan boqodhu jenna!
Mootummaan Abiy kan waamicha nagaa lagatee jiru, ijoollee Oromoo karaatti ahmbisuu itti fufee jira.
Qeerroon kunneen lamaan guyyaa har’aa Aanaa Gooroo Guutuu iddoo Maddisaa Wafcoo jedhamutti rasaasaan rukutaman.
Gumaan ummata keenyaa bilisummaan akka deebi’u shakkiin hin jiru.
Dhiigni guyyuu dhangala’u bakak iyyuuyyi iyyaa jira!!
Dawite Mekonen: Bilaashuma, New Oromo Music 2020 ( Official Music Vide
Biraanuu Gabayyoo (Moosisaa) Godina Horroo Guduruu wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq sadaasa 19/2020 mana jireenyaa isaa magaalaa Saqalaatii humna addaa Oromiyaan qabamee halkan edaa sadaasa 20/2020 ajjeefamee gatame.
Jaal Moosisaan bara 2008 irraa qabee hanga bara 2015tti murtii dabaa waggaa 10 itti murameen Oromummaan isaa yakka taateef sirna Kanaan qabamee manneen hidhaa Mikelaawwii, Qaallittii , Qilinxoo fi Baatuutti erga dararamaa turee booda mana hidhaarraa bahe.
Moosisaan yeroo ammaa kana hanga gaafa yakka sukkaneessaan ajjeefamutti bultii ijaarratee kan jiraatu bakkuma dhaloota isaa magaalaa Saqalaa ganda 01 ture.
Jaal Moosisaan nama amala qabeessa Oromummaa isaan sabboonaa fi jaalala namaa qabu ture.
Sirni balaafamaan sabboontota qaroo ajjeesuu fi dhabamsiisuu bare ammas dhiiga Ilmaan ijoollee Oromoo Oromiyaa keessatti dhangalaasaa jira.
Akka sabaatti ajjeechaa nurratti gaggeeffamaa jiruuf tokko taanee falmannee Bilisa bahuu ykn dhumnee lafarraa baduutu fala maayiiti.
Biyyeen sittaa salphatu .
Warra haqa keef falmatu nu haa godhu.
Odeefano owituu fi Waanti haarawaa ta_e hin jiru_ waanuma duriitu of-haaromse._ J Marroo Dirri